Abakhiqizi Nabahlinzeki Bezimboni Bezitshalo - Imboni yase-China yezingcaphuno zezitshalo
Impushana yenhlaba eqandisiwe iwumkhiqizo ocutshungulwa ngenqubo ekhethekile ophuma kujusi yeqabunga elisha lenhlaba. Lo mkhiqizo ugcina izithako eziyinhloko zejeli le-aloe vera, i-polysaccharides namavithamini aqukethwe ku-aloe vera anomsoco omuhle, umphumela wokuswakama nomhlophe esikhumbeni somuntu, futhi unemiphumela yokulwa nokuvuvukala, isetshenziswa kabanzi ku-cosmetics nemikhiqizo yezempilo nezidakamizwa.
I-Aloin ikhishwa emaqabunga e-aloe vera. I-Aloin, ebizwa nangokuthi i-barbaloin, inombala ophuzi (i-Aloin 10%, 20%, 60%) noma ilula phuzieluhlaza (i-Aloin 90%) impushana enokunambitheka okubabayo. Impushana ye-aloin incibilika kalula ku-organic solvent, futhi inyibilika kancane emanzini. I-Aloin ikhiqizwa emaqabunga e-aloe amasha ngokucwiliswa kwe-juicing, i-colloid milling, i-centrifugal filtration, i-concentration, i-enzymolysis kanye nokuhlanza. I-Aloin isetshenziselwa kakhulu ukuthuthukisa amasosha omzimba, ukuvimbela amagciwane, ukuvikela isibindi nesikhumba.
I-aloe emodin(1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone) iyi-anthraquinone kanye ne-isomer ye-emodin etholakala ku-aloe latex, i-exudate evela esitshalweni senhlaba. Inesenzo esinamandla se-stimulant-laxative. I-aloe emodin ayiyona i-carcinogenic uma isetshenziswa esikhumbeni, nakuba ingase ikhulise umdlavuza wohlobo oluthile lwemisebe.
Inombolo yomkhiqizo Igama lomkhiqizo I-CAS No. Umthombo wesitshalo I-Assay 1 I-Aloe Vera Gel Freeze Powder Eyomile 518-82-1 Aloe 200:1,100:1 2 Aloin 1415-73-2 Aloe Barbaloin A≥18% 3 Aloe Emodin 481-100-72 95%. I-Arbutin 497-76-7 Bearberry 99....
I-Alpha-Arbutin (4- Hydroxyphenyl-±-D-glucopyranoside) ihlanzekile, inyibilika emanzini, isithako esisebenzayo se-biosynthetic. I-Alpha-Arbutin ivimba i-epidermal melanin synthesis ngokuvimbela i-enzymatic oxidation ye-Tyrosine ne-Dopa. I-Arbutin ibonakala inemiphumela emibi embalwa kune-hydroquinone ekugxilweni okufanayo - mhlawumbe ngenxa yokukhululwa kancane kancane. Kuyindlela ephumelela kakhulu, esheshayo nephephile yokuthuthukisa ukukhazimula kwesikhumba kanye nesikhumba esilinganayo kuzo zonke izinhlobo zesikhumba. I-Alpha-Arbutin iphinda inciphise amabala esibindi futhi ihlangabezane nazo zonke izidingo zomkhiqizo wesimanje ocwebezelayo kanye nowokususa umbala wesikhumba.
I-Bakuchiol iyisithako esisebenzayo semvelo esingu-100% esitholakala embewini ye-babchi (psoralea corylifolia plant). Ichazwa njengenye indlela yeqiniso ye-retinol, iveza ukufana okumangalisayo nokusebenza kwama-retinoids kodwa ithambile kakhulu esikhumbeni. I-bakuchiol yethu ihlose ukuthuthukisa ukuvikelwa kwempilo yabantu kanye nemvelo ikakhulukazi kwezokuzimonyo.
I-Beta arbutin powder iyisithako esisebenzayo esivela esitshalweni semvelo esingasenza sibe mhlophe futhi sikhanyise isikhumba. I-Beta arbutin powder ingangena esikhumbeni ngokushesha ngaphandle kokuphazamisa ukuphindaphinda kwamaseli futhi ivimbele ngempumelelo umsebenzi we-tyrosinase esikhumbeni kanye nokwakheka kwe-melanin. Ngokuhlanganiswa kwe-arbutin ne-tyrosinase, ukubola kanye nokukhipha amanzi kwe-melanin kuyasheshiswa, i-splash kanye ne-fleck ingagitshezwa futhi ayikho imiphumela emibi edalwayo. I-Beta arbutin powder ingenye yezinto ezimhlophe nezisebenza kahle kakhulu ezidumile njengamanje. I-Beta arbutin powder futhi ingumsebenzi wokwenza mhlophe oqhudelana kakhulu ekhulwini lama-21.
I-Cycloastragenol powder inokwakheka kwamakhemikhali okufanayo naleyo ye-molecule ye-Astragaloside IV, kodwa incane futhi itholakala nge-bioavailable kakhulu, okwenza imithamo ephansi ithathwe. Isivele isetshenziswa njenge-immunostimulant ngenxa yekhono layo lokwandisa ukwanda kwe-T lymphocyte. Kodwa-ke, yizindawo zayo ezihlukile zokulwa nokuguga ezikhulisa intshisekelo emphakathini wesayensi.
I-Glabridin iwuhlobo lwe-flavonoid, ekhishwe kuma-rhizomes omile we-Glycyrrhiza glabra. Kwaziwa ngokuthi “igolide elimhlophe” ngenxa yomphumela wawo onamandla wokuba mhlophe. I-Glabridin ingavimbela ngokuphumelelayo umsebenzi we-tyrosinase, ngaleyo ndlela ivimbele ukukhiqizwa kwe-melanin. Kuyisithako esisebenzayo sokwenza mhlophe okuphephile, okuthambile futhi okusebenzayo. Idatha yokuhlola ibonisa ukuthi umphumela wokuba mhlophe we-Glabridin uphindwe izikhathi ezingu-232 kunovithamini C, izikhathi ezingu-16 kune-hydroquinone, kanye nezikhathi ezingu-1164 kune-arbutin.
I-Hesperetin iyi-trihydroxyflavanone enama-hydroxy gropus amathathu atholakala endaweni engu-3′-, 5- kanye ne-7-position kanye ne-methoxy eyengeziwe esikhundleni se-4′-position. Inendima njenge-antioxidant, i-antineoplastic ejenti kanye ne-metabolite yesitshalo. Kuyi-monomethoxyflavanone, i-trihydroxyflavanone, ilungu le-3′-hydroxyflavanones kanye nelungu le-4′-methoxyflavanones.
I-Lupinol ikhona ku-epidermis yembewu ye-lupine, ku-latex yezihlahla zamakhiwane kanye nezitshalo zenjoloba. I-Lupeol iyi-triterpene enesisindo se-molecular engu-426.72 futhi itholakala kakhulu ezithelweni ezifana nama-strawberries, umango, amagilebhisi, nama-olives. Kufakazelwe ukuthi kune-anti-oxidation, anti-inflammatory, kanye nemiphumela yokuphulukisa isikhumba ekuhlolweni kwezilwane, futhi kunomphumela othile ovimbelayo kumdlavuza webele, umdlavuza wendlala yesinye, kanye ne-melanoma yegundane.